Ho fanatanterahana ny “’ brexit” na ny « BRITISH EXIT » izay hialan’i Royaume Uni ao amin’ny Vondrona Eoropeanina (UE) izany. Tsiahivina fa taorian’ny fitsapan-kevi-bahoaka natao tany an-toerana tamin’ny 23 jona 2016 no nahazoan’ny mpomba izany hevitra izany ny taha 51.9%. Ho fanatontosana ny andininy faha-50 tamin’ny fifanarahana miaraka amin’ny UE, ny Anglisy sy ny firenena 27 mikambana ao dia nanapaka fa roa taona no nanomanana ny fialany. Nitohy hatramin’ny omaly ny fanalana ireo sainam-pirenena eoropeanina tamin’ny andrim-panjakana sy ireo tranom-panjakana maro nanehoana ny maha tsy mpikambana intsony an’ny Royaume Uni. Nanambara ny Praiminisitra Boris Johnson fa voalohany tamin’ny tantaran’izao tontolo izao no nisian’izao ary tombontsoa maro amin’izay hatreto no hositrahan’ny fireneny indrindra ny eo amin’ny lafiny ara-toekarena. Na izany aza mbola maro ny lalana aleha ary sarotra ny fandidiana hatramin’ny farany taona 2020 satria mbola anatin’ny teteza-miampita hatrany ny brexit hatramin’ny farany volana desambra izao. Mbola hisy ny fihaonana isaky ny 3 herinandro amin’ny Vondrona Eoropeanina hiresahana ny fifanarahana maherin’ny 600 tsy vita. Mbola sarotra ny asa miandry ity Praiminisitra ity ary mila manaporofo amin’izao tontolo izao ny tombony lehibe izay ambetiteniny tamin’ny fialan’ny Royaume Uni tamin’ny UE ny tenany.